IGcaba Brothers iyaziqhelelanisa nemibhikisho
AMALUNGU omndeni wakwaGcaba uMnuz Thembinkosi noMnuz Mandla Gcaba beGcaba Brothers bathi bayaziqhelelanisa nemibhikisho eyenzeka ezweni njengoba sebemataniswa nayo Isithombe: NQOBILE MBONAMBI/ africannewsagency ANA.
Thokozani Ndlovu | July 19, 2021
UMNDENI wakwaGcaba, oyizikhondlakhondla embonini yamatekisi uyaziqhelelanisa nemibiko esisabalele yokuthi uzokhipha amatekisi ahambise ababhikishi abaya ejele eMtshezi lapho kuboshwe khona owayengumengameli wezwe, uMnuz Jacob Zuma.
Lo mndeni odume ngeleGcaba Brother embonini, ubuphendula ngenkulumo eqoshiwe ethi bahlela inhlabalihide yamatekisi beyisa ababhikishi kuleli jele kusasa emizamweni yokuthi kudedelwe uZuma ejele.
Amalungu omndeni oMnuz Mandla noMnuz Thembinkosi Gcaba bathe bayakuqinisekisa ukuthi uZuma unguninalume futhi bayafuna adedelwe ejele kodwa awukho umbhikisho abawuhlelayo ngenhloso yokufaka ingcindezi kuhulumeni.
“Thina singosomabhizinisi ngeke sizibandakanye nezenzo zobugebengu njengoba sebesimatanisa nezigameko ezenzeka ezweni. Ngeke sigcolise igama lethu esesilisebenzele kangaka ngokuthi sizihlanganise nezenzo zobugebengu. Sinxusa uhulumeni ukuthi wenze uphenyo olunzulu ngabagqugquzeli balezi zigameko ukuze kuboshwe abantu abenza ubugebengu. Noma ngabe kukhona enye yezingane zethu ethintekayo kulobu bugebengu obenzeka ezweni sithi nayo ayiboshwe uma kunobufakazi bokuthi iyathinteka,” kusho uMnuz Mandla Gcaba.
Uthe njengoba sekushiwo kanje ngebhizinisi labo lamatekisi, bahlela ukuthi bawamise wonke amatekisi abo ukusebenza kusuka kusasa kuze kuphele izinsuku ezingu-30 engasebenzi.
“Ukungasebenzi kwamatekisi kuzosilimaza kodwa sizimisele ukuthi siwamise ukuze sigeze igama lethu. Ukumisa amatekisi ethu ukuthi angasebenzi kuzobe kungaqali manje njengoba sake sawamisa kwaphela izinyanga eziyisithupha engasebenzi ngenxa yazo izinkinga zokuthi kunabantu abafuna ukusihlanganisa nezenzo zobubi sibe singangene kuzona. Thina singabanumzane bemizi sinemindeni futhi siyazihlonipha,” kuqhuba yena.
Uthe sebevule necala emaphoyiseni ngale nkulumo eqoshiwe bebhecwa ngobende inyama bengayidlanga. Uqhube wathi sebeqashe nomphenyi ozimele ukuthi athole ukuthi ubani lo oqophe le nkulumo futhi kunenkampani yezobuchwepheshe ecubungula le nkulumo ngoba bafuna ukuthola ukuthi iqhamuka kubani.
Uthe iyabakhathaza lento ngoba baningi abantu abenza izinto ezimbi bese bezibiza ngokuthi bangabakaGcaba.
UMNUZ Mandla Gcaba weGcaba Brothers ecacisa ngezinyathelo abazithathayo ngokumataniswa nemibhikisho eqhubekayo Isithombe NQOBILE MBONAMBI/ africannewsagency ANA.